Potshot Pirates 3D v1.05 APK+OBB – Myanmar Mobile App Edition: Myanmar | ပြည်တွင်းပြည်ပမုိုဘိုင်းသတင်းများ
Gmail sign in ၀င်လျှင်ဖြစ်တတ်သော Can't establishareliable data connection to the server error အားဖြေရှင်းခြင်း VPlayer Video Player FULL v3.1.9 for android(latest version) Next Launcher Windows PC Theme v1.3 for android Screenshot Ultimate Pro v2.6.1 for android(latest version) Samsung galaxy S3(GTI9300) သမားများအတွက် 4.2.2 official jellybean leaked firmware ထွက်ရှိလာပါပြီ.. Home
Published On: Mon, Mar 18th, 2013 Android OS game များ | By သန်းထိုက် ဇော် Potshot Pirates 3D v1.05 APK+OBB
Tags SharePotshot Pirates 3D ဂိမ်းလေးဟာဆိုရင် အတိုက်အခိုက်ဝါသနာပါသူတွေနဲ.ဆိုသင်.တော်ပါတယ် အဲဂိမ်းလေးဟာ 3D ရုပ်ထွက်နဲ.မို. ဆော.ကစားသူတွေအလွန်နှစ်သက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ် သဘောင်္လေးနဲ. ပင်လယ်ထဲမှာသွားရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်.တော.မဆော.ရသေးဘူး သူငယ်ချင်းတို.ဆော.ကြည်.လိုက်ပါ အရမ်းနှစ်သက်သွားပါလိမ်.မယ်။ ဒီGame လေးကို Googleplay
မှာဆိုရင် $2.99နဲ.၀ယ်ဆော.ရမှာဖြစ်ပီး Myanmarmobileappမှာတော. Free Downloadရယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် (APK+OBB) ပေါင်းပီး zipfileလုပ်ပေးထားပါတယ်။Download : 100Mb လောက်ရှိပါတယ် apk ကိုအရင်ဆုံးအင်စတောလုပ်ပြီးရင်done နဲ့ထွက် ပြီးမှ data file ကို sd card ရဲ့ android , OBB ထဲမှာထဲ့ပေးလိုက်ပါ။OBB မရှိသေးတဲ့သူများက sd card ,android ထဲမှာnew folder လုပ်ပြီးရင် folder name ကို OBB ဟုပေးလိုက်ပြီးထဲ့ပေးလိုက်ပါ။
ဒီဂိမ်းလေးရဲ. Features တွေကတော.
More than 100 colorful levels, including the original geolocations, which opens, depending on the player’s location.
A realistic highly detailed 3D graphics
The ability to summon destructive Kraken
Different nucleuses with different characteristics
Different weather conditions at different levels
Realistic water, which can be touched
Mirror Download link: Zippyshareကဒေါင်းရန်
သန်းထိုက် ဇော် - Facebook Profile>>>Thanhtike Zaw<<<Thank You
Beat the Boss2(17 ) v1.6 Apk Game (42.28 Mb)
AVP: Evolution v1.3.2 APK+OBB(238Mb)
Pocket Rally v1.0.1(ကားပြိုင်ဂိမ်း)
Shine Runner v 1.4.0 game for android
zero on Root Acess ဖြစ်ပြီးသား ကို မြန်မာစာ သွင်းနည်းaung on Samsung galaxy S3(GTI9300) သမားများအတွက် 4.2.2 official jellybean leaked firmware ထွက်ရှိလာပါပြီ..swam yee on HTC One ကို Android 4.2.2 Jelly Bean based CyanogenMod 10.1 ROM အား တင်ခြင်းsitpaing on Wondershare MobileGo for Android 3.2.0 For Pc 25.49 MBaung naing on Gmail sign in ၀င်လျှင်ဖြစ်တတ်သော Can’t establishareliable data connection to the server error အားဖြေရှင်းခြင်း Android Development